Ndị ọkachamara na Semalt na-ekpughe 13 Ihe dị mfe ọ bụla Mmasị Mmasị Ọchịchọ Na-achọgharị
N'ihi na ụfọdụ ndị nwere ike iyi ka ọ na-ebuli eluakpa ájá, mana maka ole na ole, ọ bụ naanị oge. Olee otú ọ ga - esi kwe omume?
Nhazi mbụ bụ iji gbuo egwu, nke ahụ sitere n'echiche nke ọdịda, site na ịjụanọgide na-eme atụmatụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Onye na-eduzi ahịa ahịa nke Ọkachamara ,Igor Gamanenko na-ekwu na afọ nke ahụmahụ dị oke mkpa dịka ha nwerenyere aka n'ịhụ ọtụtụ ọrụ. Nke a bụ ndụmọdụ iri na atọ na iheime iji merie ahịa, na ọkachamara ahụ na-abanye na ahụmahụ ahụnke ọrụ mmepụta ihe na Semalt.
I kwesịrị inwe nnukwu foto nke ihe ịchọrọ inweta site n'echiche ahụnhazi na mmezu ikpeazụ na nlekota oru. N'otu oge ahụ, ọdị mkpa ịghọta ọnụ ọgụgụ ndị ịchọrọ itinye aka, nketeknụzụ ị na-eme atụmatụ iji rụọ ọrụ, ụgbọala nke na-enye ohere ịnweta mandị mmadụ na nkà na ụzụ. Kọwaa ndị ahịa echetara, ikike iwuna ọnụahịa ọnụahịa nke ga-ekwe nkwa na uru ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na-akwadomee ihe ruo oge ụfọdụ ruo mgbe ị ga-agbaji ọbụna ma ọ bụ karịa.
Mgbe i mechara iji esemokwu mee ihe, atụmatụ zuru ezu nke ihe niilea na-eme akụkụ dị iche iche nke echiche gị. Site na ihe kachasị mkpaọ dịkarịa ala, ihe ọ bụla ị ga-eri ga-eme ka ọ mara.Ihe kachasị mkpa nke usoro a siri ike bụ ịchọpụta ihe ka mmaoge ọ ga - ewe gị iji mezuo ihe mgbaru ọsọ gị bụ nke dị njọegosiputara n'oge ebumnuche.
N'ezie, ị kwesịrị ịmatakwu ụdị ụfọdụozi, ma nke ahụ ezughị iji kwenye na i nwere ihe ịga nke ọma.Ya mere, ọ dị mkpa maka nchọpụta miri emi nke a na-apụghị izere ezere dị ka ụfọdụEziokwu nwere ike ọ gaghị emeghe gị site na mmalite ma ọ bụ ihe nweredị iche iche, ọ dịkwa mkpa ka ị mara ya..Ọzọkwa, dabere naihe ị chọrọ, iwepụta ozi kwesịrịmee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Na njedebe, ozi ziri ezi bụdị ezigbo mkpa nke na, ị gaghị emefu ego na ụzọ na-ezighị ezi.
Mee nyocha banyere ozi ị nwetara, kwado yaikwesị ntụkwasị obi ma dozie ya na mgbaru ọsọ echiche dị kaanyị ekwuola tupu. Mgbe nkwenye, njiko akadị ezigbo mkpa n'oge na-adịghị anya ọ kpatara yandabere nke ihe omuma a.
Mgbe ị batara na ihe ọmụma niile,ọ ga - ewe oge iji legharịa ma hụ ma ọ bụrụenwere uzo di nma kariamezuo otu ihe ma ọ bụ nsonaazụ dị mma. Kedu ihe ịtụlee? Ị na-ele ndị ahịa anya ma ọ bụNdị ahịa mbụ, ọ bụghị ego, oge ma ọ bụ ihe onwunwe.Mgbe ị ghọtara ihe kachasị mkpamaka afọ ojuju ndị ahịa, mgbe ahụ ị kwesịrị ịtụle yaihe ego, oge na ihe onwunwe naahọrọ nhọrọ kachasị mma maka ụzọ gị.
Dụpụta Atụmatụ Ikpeazụ
Site na nyochaa uzo di iche iche di,ị nwere ike ugbu a inwe nkwuwa okwu na atụmatụiji mee ihe, nke ga-eme ka ndi nkiti 'ọdịmma. Otu n'ime ndị ọzọ ịhọrọ ga-eguzoekwu banyere afọ ojuju ndị ahịa na oge. Emelaechefu na ị nwere ohere iji otutuusoro na oge dị iche iche dabere naọnọdụ ndị na-emeri. Nke kachasị mkpaihe iji mezuo bu uzo ogugu ndi mmadu.
Họrọ Isi Iyi nke Ego
Ụgha azụmahịa gị bụ ihe dị mkpa n'imeinweta ego dị mkpa. Ọ bụ ngosipụta doro anya nke ihe kpatara ebumnuche naihe mere ị ga - eji gbasoro otu atụmatụ megide nsogbu niile. Ọ ga-abụ ogena ọkaibe, dị mfe na nke doro anya na obi abụọ na, ụdị ọ bụla nke enweghị nchekasị. Dị nnọọ mkpa,ị ga - eji isi ihe ndị na - agaghị emetụta azụmahịa gị, dịka ọmụmaatụ,nnukwu mmasị, ogologo oge na mgbagwoju anya iwu, ọnọdụ siri ike makanyocha. Na-akpata mgbe niile na ego nke isi obodo nke ga-aza ajụjụ maka ụdị niilenke ihe ize ndụ ma ka na-adabere na njedebe nke mmiri ego ị ga-atụ anya ya.
Melite Atụmatụ Gị
Ọ bụghị oge gị na ihe onwunwe gịiji belata ihe omume nke ga - eduga na ọnwụ. Ya mere, wepụta oge ma nyochaa ihe niile ị meworomaka oge gara aga, izu na ọbụna ọnwa. Ekwela ka o na-abanye n'ime afo mana ma o buru ya, meejide n'aka na ike agwụla gị ma ọ bụ mee ka ị gbanwee..Ikekwe, enwere ike inwe ụfọdụ ntụpọagafe ime. Mgbe ịchọtara ha, egbusi oge ọ bụla, mee ihe dị mkpa ma zukọta na nzọụkwụ ọzọ.
Mezue Atụmatụ Gị
Oge eruola ka ọ na-egwugharị ma na-egwu egwuntakịrị ntakịrị n'ihi na ị maghị ihe echere. Ọ bụ ezie na okwu "atụmatụ na-azọpụta gị ugboro abụọogologo oge n'oge mmejuputa atumatu "bu eziokwu, ma o nweghi mgbe o kwusiri ike na odi mkpa maka ngwa ngwa, ya mere mee ya ngwa ngwana mgbe niile. Nke a ga-enyere gị aka ịhazigharị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na e nwere ọnọdụ ụfọdụ na-atụghị anya yaegosi na na njedebe, ọdịiche dị n'etiti usoro atụmatụ ahụ na atụmatụ e mepụtaraga-adị nnọọ warara ma chịkwaa.
Nyochaa atụmatụ gị
Enweghị azụmahịa ọ bụla na-aga nke ọmanlekota na njikwa. Nke ahụ bụ ihe ngosi nke nkwado na mmesi obi ike. Ihe kacha mkpanlekota oru bu ime ihe ziri ezi n'egbughị oge n'ihi na o di anya ka o siatụmatụ, ọ na-esikwu ike ọ na-achịkwa, ọ bụkwa ego ka ọnụ ahịa ahụ na-esiwanye njọ. Backlognjikwa na-agụnye ọkwa dị elu; ajụjụ bụ: onye ga-enye mmasị yaihe kacha mkpa karịa onye ọzọ? Ihe ọzọ na-abata n'uche bụ esemokwu.
Wepu Ihe Omume
Ọ dị mkpa iji nweta ihe oyiyi ahụ na aha yanke azụmahịa na ihe ndị ọzọ dị ka ụgwọ, afọ ojuju, na nchịkọta ihe onwunwe na-akpalimmezi mmezi dị mkpa. Mbịakọta maka rework, mmepụ na ntụpọ ntụpọ ga-abụeme n'ime oge a kapịrị ọnụ nke na - agaghị emetụta oge azụmahịa dum.
Ka Ndị Mmadụ Mara Business Gị
Jiri ọrụ mgbasa ozi, okwu ọnụna usoro mgbasa ozi ọ bụla iji kwalite azụmahịa gị. Nke a ga-eme ka ahịa dịkwuo elu ma nwekwuo ego ha ga enwetaakwụ ụgwọ ga-eji nwayọọ nwayọọ daa ma nweta uru ga - aga n'ihu.
Akwụsịla nlekota oru
N'ikpeazụ, egbula nlekota oru makaụwa azụmahịa bụ ihe dị egwu nke na-apụghị izere ezere mgbanwe. Na-agbasi mbọ ike, na-amụ ihe, ma na-edebeitinye ihe ọmụma na nkà. Ọganihu na mmụba ga-abịa n'ụzọ nkịtị, echiche nke ịbịakarị ga-ejide gị Source .